Trade Marketing Manager Archives - Glory Assumption Space
Trade Marketing Manager – Male/Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Companyကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.Trade Marketing Manager – Male/Female (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / လှိုင်မြို့နယ် ။ - Any Graduate - More prefer to Masters in Marketing or Business Development Strategies - Minimum7years relevant Trade Marketing / Branding experience in Beverages Industries - Excellent interpersonal skills with good attitude as well as good aptitude - Understanding the market demands and customer’s behaviours - Effective communicable language skills in bilingual (Myanmar and English) - Able to travel in anytime - Able to develop Team Management - Able to drive to get the achievement of the Organizational goals as well as individual goals at the same time - အလုပ်ချိန် ( ၈:၃၀ ) မှ ညနေ ( ၅:၃၀ ) - စနေတပတ်ခြားပိတ်သည်။ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ - ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။ - အဖျော်ယမကာ ၊ အချိုရည်နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ Job Description 1) Plan, execute and manage to all promotion activities and events (NCP/NTP/RCP/RTP). 2) Monitor and manage the promoter team to get an effective solution. 3) Control to A&P and distribution process to all branches. 4) Field auditing or checking the way of promoters & merchandisers. 5) Responsible for selecting and recruiting the right persons for PG and merchandising team. 6) Setting the Sales Out Program and related processes. 7) Processing the retail mapping data and index standard development. 8) Manage to be effective visibility display and promotion activities. 9) Building the relationship with the suppliers for performance base review. 10) Design and implement organization business strategy and activities. 11) Reporting to the Management as required. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223785 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Trade Marketing Manager - M (5 ) Posts /လစာ- ၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် /စမ်းချောင်းမြို့နယ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Trade Marketing Manager - M (5 ) Posts /လစာ- ၅၀၀၀၀၀/-ကျပ် /စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ MBA (သို့) Diploma ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။ Trade Marketing Department တွင်လိုအပ်နေသော Merchandising ,Marketing နှင့် ပက်သက်သော Plan များကို ရေးဆွဲခြင်း၊ စီးမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Customser များ၏ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။FOC နှင့်ပက်သက်သော Gift Box,POSM, Merchandising tools များကို ပြတ်လပ်မူ မရှိစေရန်၊ လေလွှင်မူ့မရှိစေရန်၊ မှာယူခြင်၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမူများကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သူ။ Sale and Distribution Department နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အရောင်းတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Merchandising Supervisor နှင့် Marketing Executive များ၏ Report များကို စိစစ်၍ လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန်ပြသပေးရမည်။ UnderPressure အောက်တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ် ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်၊ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။